Ọnụ Ọgụgụ 29 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 29:1-40
Otú a ga-esi na-achụ àjà dị iche iche (1-40)
Ụbọchị a ga-afụ opi (1-6)
Ụbọchị Ikpuchi Mmehie (7-11)
Ememme Ụlọ Ndò (12-38)
29 “‘N’abalị mbụ n’ọnwa nke asaa, unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ. Unu arụla ọrụ ọ bụla siri ike.+ Ọ bụ ụbọchị unu ga-afụ opi.+ 2 Unu ga-eji otu oké ehi, otu ebule, na ụmụ ebule asaa ndị gbara otu afọ otu afọ chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ, ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma.* Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma. 3 Unu ga-achụkọta ha na àjà ọka ha, ya bụ, ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ. Ụzọ atọ n’ụzọ iri nke otu efa ga-abụ maka oké ehi ahụ, ụzọ abụọ n’ụzọ iri abụrụ maka ebule ahụ, 4 otu ụzọ n’ụzọ iri abụrụ maka nwa ebule nke ọ bụla n’ime ụmụ ebule asaa ahụ. 5 Unu ga-achụkwa otu nwa mkpi n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie a ga-eji kpuchiere unu mmehie. 6 Unu ga-achụ ihe ndị a n’àjà, ha na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ kwa ọnwa na àjà ọka ya na ya na-agakọ,+ chụọkwa àjà a na-esu ọkụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ.+ Unu ga-achụkọta ha na àjà mmanya ha+ otú e nyere iwu ka e si na-achụ ha, ka ha bụrụ àjà na-esi ísì ọma,* àjà a na-esu ọkụ a na-achụrụ Jehova. 7 “‘N’abalị iri n’ọnwa asaa ahụ, unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ.+ Unu ga-emekpa onwe* unu ahụ́.* Unu arụla ọrụ ọ bụla.+ 8 Unu ga-eji otu oké ehi, otu ebule, na ụmụ ebule asaa ndị gbara otu afọ otu afọ chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ, ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma.* Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 9 Unu ga-achụkwa ha na àjà ọka ha, ya bụ, ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ. Ụzọ atọ n’ụzọ iri ga-abụ maka oké ehi ahụ, ụzọ abụọ n’ụzọ iri abụrụ maka ebule ahụ, 10 otu ụzọ n’ụzọ iri abụrụ maka nwa ebule nke ọ bụla n’ime ụmụ ebule asaa ahụ. 11 Unu ga-achụkwa otu nwa ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà mmehie a ga-eji kpuchiere unu mmehie,+ chụọkwa àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ nakwa àjà mmanya ha na ha na-agakọ. 12 “‘N’abalị iri na ise n’ọnwa nke asaa, unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ. Unu arụla ọrụ ọ bụla siri ike. Unu ga-emekwara Jehova ememme ruo ụbọchị asaa.+ 13 Unu ga-eji oké ehi iri na atọ, ebule abụọ, na ụmụ ebule iri na anọ ndị gbara otu afọ otu afọ chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ,+ ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma.* Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 14 Unu ga-achụkwa ha na àjà ọka ha, ya bụ, ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ. Ụzọ atọ n’ụzọ iri ga-abụ maka oké ehi nke ọ bụla n’ime oké ehi iri na atọ ahụ, ụzọ abụọ n’ụzọ iri abụrụ maka nke ọ bụla n’ime ebule abụọ ahụ, 15 otu ụzọ n’ụzọ iri abụrụ maka nwa ebule nke ọ bụla n’ime ụmụ ebule iri na anọ ahụ. 16 Unu ga-achụkwa otu nwa ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ya na ya na-agakọ.+ 17 “‘N’ụbọchị nke abụọ, unu ga-eji oké ehi iri na abụọ, ebule abụọ, ụmụ ebule iri na anọ ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọ àjà. Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 18 Ọ bụ ole oké ehi, ebule, na ụmụ ebule ndị ahụ dị ka unu ga-eji mara otú àjà ọka na àjà mmanya unu ga-achụ ga-aha. Unu ga-achụ ha otú e nyere n’iwu ka e si na-achụ ha. 19 Unu ga-achụkwa otu nwa ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ha na ha na-agakọ.+ 20 “‘N’ụbọchị nke atọ, unu ga-eji oké ehi iri na otu, ebule abụọ, ụmụ ebule iri na anọ ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọ àjà. Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 21 Ọ bụ ole oké ehi, ebule, na ụmụ ebule ndị ahụ dị ka unu ga-eji mara otú àjà ọka na àjà mmanya unu ga-achụ ga-aha. Unu ga-achụ ha otú e nyere n’iwu ka e si na-achụ ha. 22 Unu ga-achụkwa otu ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ya na ya na-agakọ.+ 23 “‘N’ụbọchị nke anọ, unu ga-eji oké ehi iri, ebule abụọ, ụmụ ebule iri na anọ ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọ àjà. Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 24 Ọ bụ ole oké ehi, ebule, na ụmụ ebule ndị ahụ dị ka unu ga-eji mara otú àjà ọka na àjà mmanya unu ga-achụ ga-aha. Unu ga-achụ ha otú e nyere n’iwu ka e si na-achụ ha. 25 Unu ga-achụkwa otu nwa ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ya na ya na-agakọ.+ 26 “‘N’ụbọchị nke ise, unu ga-eji oké ehi itoolu, ebule abụọ, ụmụ ebule iri na anọ ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọ àjà. Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 27 Ọ bụ ole oké ehi, ebule, na ụmụ ebule ndị ahụ dị ka unu ga-eji mara otú àjà ọka na àjà mmanya unu ga-achụ ga-aha. Unu ga-achụ ha otú e nyere n’iwu ka e si na-achụ ha. 28 Unu ga-achụkwa otu ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ya na ya na-agakọ.+ 29 “‘N’ụbọchị nke isii, unu ga-eji oké ehi asatọ, ebule abụọ, ụmụ ebule iri na anọ ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọ àjà. Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 30 Ọ bụ ole oké ehi, ebule, na ụmụ ebule ndị ahụ dị ka unu ga-eji mara otú àjà ọka na àjà mmanya unu ga-achụ ga-aha. Unu ga-achụ ha otú e nyere n’iwu ka e si na-achụ ha. 31 Unu ga-achụkwa otu ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ha na ya na-agakọ.+ 32 “‘N’ụbọchị nke asaa, unu ga-eji oké ehi asaa, ebule abụọ, ụmụ ebule iri na anọ ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọ àjà. Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 33 Ọ bụ ole oké ehi, ebule, na ụmụ ebule ndị ahụ dị ka unu ga-eji mara otú àjà ọka na àjà mmanya unu ga-achụ ga-aha. Unu ga-achụ ha otú e nyere n’iwu ka e si na-achụ ha. 34 Unu ga-achụkwa otu ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ya na ya na-agakọ.+ 35 “‘N’ụbọchị nke asatọ, unu ga-enwe nzukọ pụrụ iche. Unu arụla ọrụ ọ bụla siri ike.+ 36 Unu ga-eji otu oké ehi, otu ebule, na ụmụ ebule asaa ndị gbara otu afọ otu afọ chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ, ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma.* Ha niile ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+ 37 Ọ bụ ole oké ehi, ebule, na ụmụ ebule ndị ahụ dị ka unu ga-eji mara otú àjà ọka na àjà mmanya unu ga-achụ ga-aha. Unu ga-achụ ha otú e nyere n’iwu ka e si na-achụ ha. 38 Unu ga-achụkwa otu ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ya na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà ọka ya na ya na-agakọ, nakwa àjà mmanya ya na ya na-agakọ.+ 39 “‘Unu ga na-achụrụ Jehova ihe ndị a n’àjà mgbe unu na-eme ememme unu na-eme n’oge dị iche iche,+ ha na onyinye ndị unu kwere ná nkwa+ na onyinye ndị si unu n’obi,+ ka ha bụrụ àjà unu a na-esu ọkụ+ na àjà ọka unu+ na àjà mmanya unu+ na àjà udo unu.’”+ 40 Mosis gwara ndị Izrel ihe niile Jehova nyere ya n’iwu.
^ “Mmadụ imekpa onwe ya ahụ́” pụtara na onye ahụ agaghị emere onwe ya ihe ndị o kwesịrị imere onwe ya. Ibu ọnụ so na ya.
Ọnụ Ọgụgụ 29